Kuuriyada Waqooyi ma leedahay awood ay ugu babac dhigto Maraykanka? - BBC News Somali
Kuuriyada Waqooyi ma leedahay awood ay ugu babac dhigto Maraykanka?
9 Agoosto 2017
Image caption Gantaalada riddada dheer ee Waqooyiga Kuuriya
Kuuriyada waqooyi waa dal go'doonsan, faqri ah, balse si xad dhaaf ah xagga ciidanka uga horumarsan. Hoggaanka dalkaasi waxa ay leeyihiin hal ujeeddo oo muhiim ah, taasi oo ah sii jiritaan. Sababtaasi darteed ayay dhaqaale badan u galiyeen kobcinta hubka nuyuukleerka iyo barnaamijyada gantaalada riddada dheer si ay ugu noqdaan waxa ugu dambeeya ee ay isku difaacaan.
Isticmaal kasta ee hubka nuyuukleerka ayaa horseedi karta masiibo aanan la qiyaasi karin, gaar ahaan Kuuriyada Waqooyi lafteeda, waxayna u badantahay in xukuumaddani ay ka badbaadi doonin xasarad dhacda. Balse walwalka ugu weyn taas ma ahan, halista ugu weyn waxa ay ka taagantahay in dagaalka afka ah ee u dhaxeeya Waqooyiga Kuuriya iyo Maraykanka uu hadda isu rogayo ficil.
Kuuriyada Waqooyi waa dal ku caan baxay in uu isticmaalo awood, waxaana dhici karta in sidii hore oo kale markale ay xoog iyo awood isticmaasho.
Bishii Maarso sannadkii 2010-kii, waxaa la rumeysanyahay in Waqooyi Kuuriya ay quusisey markab yar oo ay leedahay Koonfurta Kuuriya, waxaana dhici karta in sidaasi si la mid ah haddii uu muranka hadda jira sii xoogeysto ay markale Koonfurta Kuuriya bartilmameed u noqon karto ficilada Waqooyiga.
Donald Trump oo u hanjabay Waqooyiga kuuriya
K/Waqooyi oo "tijaabin rabta nukliyeer kale"
Tayo ama Tiro
Image caption Waqooyiga Kuuriya waxa ay ku hanjabtaa awoodda gantaalada riddada dheer
Ciidammada Waqooyiha Kuuriya waa kuwa aad oga tiro badan kuwa Koonfurta, waxaana ciidammadaasi ay joogaan aagga militariga ka caaggan ee labada Kuuriya u dhaxeeya. Waxaa si joogto ah loo sheegaa in gantaalada caadiga ah ee Waqooyiga Kuuriya ay saacado gudahood ku gaari karaan magaalada Seoul ee caasimadda Koonfurta haddii uu dagaal dhoco.
Balse taasi ma ahan mid sax ah, magaalada Seoul waxa ay xadka u jirtaa 40km, waxaana gaari kara oo kaliya gantaalada ugu riddada dheer ee Waqooyiga, waxayna arrintani halis ugu noqon karaan weerar rogaal celis ah oo kaga yimaada Koonfurta.
Xagga tayada waxa aad ugu horeysa Koonfurta oo sidoo kale taageero buuxda kaa hesha Militariga Maraykanka oo ah kan adduunka ugu casrisan. Dagaal kasta oo dib oga soo dhex cusboonaada labada Kuuriya sida kii dhacay 1950-kii waxa ka dhalan kara qasaaro balaaran oo xagga ah rayidka ku dhaqan Seoul, balse waxa uu sidoo kale cawaaqib xumo weyn ku reebi doonaa xukuumadda Waqooyiga Kuuriya.
Uma badna in uu dhasho dagaalka labaad ee Kuuriya, balse waxaa jirta halista ah in Waqooyiga ay awoodeeda ciidan u isticmaasho daandaansi iyo talaabooyin kale oo dhalin kara xasarad guud.
Dal Faqri ah iyo hub kala duwan
Marka laga soo tago riddada ay gaari karaan gantaalada Waqootiga, waxa jira hubka kiimikada ah ee uu dalkani heysto, waxaa kale oo la rumeysanyahay in uu haysto hubka biological-ka loo yaqaano ee halista badan. Waxa kale oo Waqooyiga leeyihiin ciidamo gaar ah oo aad u tababaran iyo kooxo loo carbiyey in ay u dusaan dhanka Koonfurta oo qalqal galiyaan.
Waxaa hadda cusub awood hor leh oo ay ku jabsadaan kumbuyuutaraadka.
Sidaasi awgeed Waqooyiga waxa uu heystaa siyaabo badan oo ay ku qaadi karaan talaabooyin militari, hase yeeshee weerar kasta oo ka dhan ah Maraykanka ama xulafadiisa ayaa waxa ay dhalin kartaa dagaal guud. Haddii aysan xukuumadda Pyongyan ahayn mid qar iska-xoor ah, waa in ay fahamtaa halista ay lugaha la galayso.
Hoggaanka sare ee Waqooyiga Kuuriya ayaa rumeysan in haddii waddamada Ciraaq iyo Liibiya ay haysan lahaayeen hubka nuyuukleerka iyo gantaalada riddada dheer aanan xukunka laga tuuri lahayn madaxdoodii kaligii talisyada ahaa.
Balse dagaal dhaca ma jirto cid uu faa'iido u leeyahay , waxaana habboon in dhinacyada oo dhan ay ka digtoonaadaan halista dhalan karta iyo waliba luuqada ay ku hadlayaan.